अढाई अर्बको कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् तर मालिक भने साइकल चढेरै दैनिकी चलाउँछन् - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / अढाई अर्बको कम्पनीमा ९,५०० कर्मचारी छन् तर मालिक भने साइकल चढेरै दैनिकी चलाउँछन्
भेम्बुले कसरी त्यहाँबाट काम गरिरहेका छन् त?एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा इन्टरनेटले दिएको छ त्यसैले श्रीधर उच्च गतिको इन्टरनेट सम्पर्कमा रहन्छन्। एउटा ठूलो र सफल कम्पनीका हाकिम भएका कारण उनलाई केही फाइदा पनि छ।
उनी किन यहाँ आए? भेम्बु भारतमा जन्मिएका हुन् र आफ्नो स्कुले दिनमा बिदाको समय पुर्ख्यौली घरमा बिताएको समय सम्झन मन पराउँछन्। अध्ययनका लागि अमेरिका गए पनि र उतै काम भए पनि उनी सधैँ भारतको आफ्नो गाउँमा उनी फर्किन चाहन्थे। श्रीधरले जब सान फ्रान्सिस्कोको बे एरिया छोडे उनको उक्त निर्णयप्रति उनका सहकर्मीहरू आश्चर्यचकित भएनन्।
“एक तरिकाले भन्ने हो भने श्रीधरले सधैँ कार्यालयमा नरही टाढा रहेर नै काम गरे। जब उनी क्यालिफोर्नियामा थिए, हाम्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीले भारतको चेन्नाइस्थित कार्यालयबाटै काम गरे,” जोहो कम्पनीको मार्केटिङ तथा कस्टुमर एक्सपिरियन्सका उपप्रमुख प्रबल सिंहले भने।“विभिन्न भूगोलमा हाम्रो टोली फैलिएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कहाँ बस्छन् भन्ने कुराले हाम्रो कामलाई असर गर्दैन,” उनले भने। अमेरिका, ब्रजिल र लिङ्गापुर अनि भारतका विभिन्न गाउँमा रहेका आफ्ना कर्मचारीसँग भेम्बु निरन्तर अन्तर्क्रियामा रहन्छन्।
चेन्नइमा जोहोको ठूलो कार्यालय छ तर थुप्रै कर्मचारीहरू आफ्नो गृहनगरबाटै काम गर्न रुचाउँछन् आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अघि भेम्बुले भारत र अमेरिकाका उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेका थिए। तर अहिले उनी शैक्षिक प्रणालीको निन्दा गर्छन्।उनले मद्रासस्थित इन्डियन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट इन्जिनियरिङ गरे र त्यसपछि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका लागि अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालय गए।
आफ्नो कार्यालयमा श्रीधर बिल गेट्स र वारेन बफेटजस्ता केही अर्बपतिले मात्रै आफ्नो ठूलो सम्पत्तिको हिस्सा परोपकारी काममा लगाएका छन्। तर भेम्बु पश्चिमा शैलीलाई नक्कल गर्न इच्छुक छैनन्। उनी आफ्नो व्यापारमा सामाजिक उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्छन्।
तर के उनी सधैँ गाउँमै बस्नेछन्? महामारी सकिएपछि अमेरिकामा रहेको आफ्नो कार्यालयमा जाने आशामा भेम्बु छन् तर उनका अनुसार त्यो एउटा छोटो भ्रमण मात्रै हुनेछ। अमेरिकामा स्थायी रूपमा फर्किने कुनै योजना नरहेको र सिलिकन भ्यालीको पैसाले आफूलाई नलोभ्याउने उनी बताउँछन्।
म एउटा कम्पनी चलाइरहेको छु। यो कम्पनी धनी छ। तर त्यसको अर्थ त्यही अनुसारको जीवनशैली मेरो हुनुपर्छ भन्ने होइन। मेरो त्यसमा रुचि छैन। म केहीका लागि पनि यो जीवन गुमाउन चाहन्नँ, उनी खुलाउँछन्। हामी सोच्ने गर्छौँ कि पैसाले सबै कुरा हुन्छ। त्यो होइन। समाजसँग जोडिन आवश्यक छ।